Maalin: Janaayo 20, 2017
Xiisaha degdegga ah ee Erciyese ee Semester-ka: Kuwa doonaya inay ku qaataan fasaxa simistarka wanaagsan, Xarunta Erciyes Ski Center, waxay ku raaxeysan doontaa barafka iyo madaddaalada ... Sannadkan 23 Janawari - 3 Febraayo 2017 taariikhi ah inta u dhexeysa Febraayo [More ...]
Hab fudud oo Gaadiidka loogu talagalay taageerayaasha Eskişehirspor
Gawaarida Gaadiidka ee Eskişehirspor Taageerayaasha: Eskişehirspor iyo Nesine.com Eskişehir Basket waxay si fududaan ugu heli karaan taageerayaasha Degmooyinka Eskişehir Caasimadaha Cayaaraha la ciyaari doono 21 Janawari Sabtida. Ku taageerista Eskişehirspor wadada horyaalnimada [More ...]
Gaadiidka Kayseri wuu sii raaxayn doonaa
Gaadiidka ee Kayseri waxay noqon doontaa degganaan badan: Dawladda Hoose ee Magaalada Kayseri ayaa sii wadaysa dadaalkeeda ay ku doonayso inay ku xaqiijiso mashruucyo gaadiid ka dhigaya mid ka sii raaxo badan Kayseri. Ujeedadaas awgeed, kulanka lagu qabtay hoolka shirarka ee Dawlada Hoose [More ...]
Qiimaha kor u qaadida bursada
Qiimaha jidadka wadada Bursa ayaa yimid: Qiimayaasha wadada la door bidaa waa la kordhiyay si loogu tago Uludağ si dhib yar oo raaxo leh. Qiimaha hal dhinac ee gaariga fiilada ayaa ka kordhay 25 TL ilaa 30 TL, iyo safarka wareega ee ka socda Uludag ilaa 35 TL. [More ...]
Laga bilaabo bilicda Siemens ee software-ka gaarka ah ee istiraatiijiga ah, 4 noocyo kala duwan ayaa ka shaqeeya Bursarayda, nidaamku wuu jahwareerayaa
Gawaarida kala duwan ee 4 ayaa ka shaqeeya Bursaray, kaasoo ka bilaabaya barnaamijka 'Siemens' ee wagon-ku-habboon, nidaamka ayaa jahwareer ku ah nidaamka Bursa ee la xiriira nidaamka tareenka fudud bilaabmay muddadii Teoman Özalp dabayaaqadii. Daraasadaha suuragalnimada ayaa la diyaariyey, amaahda la helay, jilicsan [More ...]
Baaskiil gaar ah oo loogu talagalay Bursaray ayaa bilaabay in ay dib ugu noqoto qaybta Otosansit-Kestel
Fiilo si gaar ah loo soo saaray Bursaray waxay bilaabeen inay ku jiidaan qaybta Otosansit-Kestel: Akhristayaasha tiirarkaani waxay yaqaaniin wixii ka dhacay khadka Kestel ee Bursaray. Marka ugu horeysa ee Kestel transformer uu ku gubtay aaladda qalabka wax lagu beddelo. Qalabka wuxuu socdaa 8 toddobaad. [More ...]
Agaasimaha Gobolka TCDD Nihat Aslandan ayaa booqanaya Madaxweynaha
Agaasimaha Gobolka TCDD Nihat Aslan Booqashada Madaxweynaha ee Xannaaneyaha: 1. Agaasimaha Guud ee Tareenka Gobolka Nihat ASLAN wuxuu ku booqday Duqa Magaalada Bozüyük Fatih BAKICI xafiiskiisa. Dhismaha uu bilaabay Agaasimaha Guud ee TCDD Bozüyük intii lagu jiray booqashada, [More ...]
Daawo Sawirada Qaraxyo Xoogan Oo Ka Dhacay Bakhaarada AK Parti iyo Madaxwaynaha MHP ee Samsun
Samsunda AK Party iyo MHP Gobalada Tareenada ee Xawaaraha Xawaaraha Sare: Samsun inta udhaxeysa AK Party iyo Heerka Tareenka Heerka Sare ee MHP. Gudoomiyaha Xisbiga Mucaaradka ah ee Samsun AK Xisbiga Muharrem Göksel'in [More ...]
Qiimaha jidadka ayaa ka soo kacay Bursa: Qiimaha roodka ayaa doorbiday in la fuulo oo fududaan oo fuulo Uludağ. Qiimaha hal dhinac ee gaariga fiilada ayaa ka kordhay 25 TL ilaa 30 TL, iyo safarka wareega ee ka socda Uludag ilaa 35 TL. [More ...]
Sarkaalka Gaadiidka-Sen wuxuu sii wadaa howlihiisa abaabulida: Sarkaalka Gaadiidka –Gudoomiyaha Gaadiidka Can Cankesen iyo Madaxweyne kuxigeenka İbrahim Uslu waxay sii wadaan howlaha abaabulkooda. Cankesen iyo Uslu waxay ku sugan yihiin Istanbul [More ...]
Kartal-Yakacık-Pendik-Tavşantepe Metro Line ayaa furmaya berri: Kartal-Yakacık-Pendik-Tavşantepe Metro Line ayaa la furi doonaa berrito iyadoo ay ka qeyb galayaan Madaxweyne Erdogan. Kartal-Yakacık-Pendik-Tavşantepe Metro Line iyo xafladda furitaanka maalgashiga iyo adeegyada Pendik iyadoo ay ka qeyb galayaan Madaxweyne Erdogan berri [More ...]
Tareenka Heerka Sare ee UK
Boqortooyada Midowday (UK) waxay bilaabaysaa qandaraas xawaare sare leh: Boqortooyada Midoobey waxay daah fureysaa tareen xawaare sare leh oo qiimahoodu dhan yahay 3,4 bilyan oo UK ah oo loogu talagalay mashruuca tareenka xawaaraha dheereeya ee isku xiraya London iyo waqooyiga Wadanka. [More ...]
gaadiidka Badda ee horumar weyn oo, UN magaalada Garacad ee gobalka, Ulusoy gadashada roro: Annual 322 kun oo baabuurta oo qaadi kara 12 weelashii casriga ah waxa lagu qiimeeyaa inta u dhaxaysa raxan doonniyo Turkey-Europe Garacad ee gaadiidka intermodal ku hawlan Garacad ee Hawlgalka Qaramada Midoobay [More ...]
Masaajid Airport 3.Kez loo sameeyey in Turkey:. waqti ay dhaqso u samee Airport 3 5-6 kun oo qof awood masaajidka Samaynta "Airport City" ayaa lagu wadaa inuu ka dhaco mashaariicda dhismaha masaajidka la dhammeeyo. Mashaariic la diyaariyey ee hor yaal guddiga [More ...]